Maraykanka Oo hakiyay Dhaqaalihii uu Itoobiya ku siin jiray Dagaalka ka dhanka ah Waxa loogu yeero “Argagaxisada”. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Maraykanka Oo hakiyay Dhaqaalihii uu Itoobiya ku siin jiray Dagaalka ka dhanka ah Waxa loogu yeero “Argagaxisada”.
On Aug 29, 2020 278 0
Majallada caanka ah ee Foreign policy oo kasoo baxda dalka Maraykanka ayaa daabacay xogo khaas ah oo sheegaya in dowladda Maraykanka ay jartay qeyb kamid ah dhaqaalihii dowladda Itoobiya ay ku siin jirtay dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero Argagixisada.
Majallada oo soo xiganeysa saraakiil sar sare oo katirsan dowladda Maraykanka ayaa sheegeysa in meesha ay ka baxday 130 milyan oo bil weliba dowladda Maraykanka ay siin jirtay dowladda Itoobiya, dhaqalahaas oo uu Maraykanka ugu talagalay dagaalka uu kula jiro Muslimiinta.
Arintan waxay salka ku heysaa sida ay sheegeyso majallada baahisay warbixinta khilaafaadka Itoobiya iyo Masar ka dhexeeya ee ku aadan biya xireenka An-nahda, iyadoo dowladda Itoobiya ay ka dhega adeegtay awaamiir uga yimid dhanka Maraykanka oo ku aadan in la wada hadlo.
Inkastoo aaney ka dhigneyn in dhamaan dhaqaalihii uu Maraykanka siin jiray Itoobiya uu meesha ka baxay, hadana haddii uu dhab noqdo warkan waxay ka dhigantahay in Itoobiya ay weysay dhaqaale ballaaran oo ay bil weliba ka qaadan jirtay dowladda Maraykanka.
Itoobiya ayaa ka dhigan wadanka Reer galbeedka ku mtalaya geeska Africa, waxaana xiriirka kala dhexeeya reer galbeedka uu yahay mid soo jiitamayay qarniyo fog, tan iyo markii uu Maraykanka ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagaxisadana, waxay dowladda Itoobiya kaalmaha hore kaga jirtay dagaalkaas.